एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद प्रस्ताव: कस्लाई फाइदा कस्लाई बेफाइदा ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
नेकपा एमालेको विधानमा ७० वर्षे उमेर हद कायम राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्ताव पारित भएमा एमालेको नेतृत्वमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ भने नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा पुग्नको लागि ढोका खुल्ने विश्वास गरिएको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकमा पेस भएको विधान मस्यौदामा सबै तहका कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । आगामी १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म चल्ने विधान महाधिवेशनले यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेमा यसले मंसिरमा हुने १० औं महाधिवेशनलाई समेत प्रभाव पार्नेछ ।
अमृत बोहोरा ७३ बर्ष पुगिसकेका छन् भने सत्यनारायण मण्डल ७० बर्ष पुगिसकेका छन् । यी दुबैजनालाई नेताहरु १० औं महाधिवेशनबाटै प्रभावित हुनेछन् । उमेर हदले केपी शर्मा ओलीलाई १० औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्न अवरोध हुनेछैन । किनभने उनी आगामी फागुनमा मात्र ७० वर्ष पुग्दै छन् ।
तर ११ औं महाधिवेशनबाट यसको प्रभाव अझ ब्यापक हुने भएकाले दोस्रो तहमा रहेका अध्यक्षका आकाङ्क्षी नेताहरुलाई १० औं महाधिवेशन नै अन्तिम अवसर हुनेछ । ११औँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा केपी ओलीसहित भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, केशव बडाल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापाको उमेर ७० वर्ष नाघिसकेको हुनेछ ।
कुन चर्चित नेताको उमेर कति?
नेपालका राजनीतिक दलहरुमा पुरानो पुस्ताका नेताहरुले नेतृत्व ओगटेका कारण नयाँ पुस्ताले अवशर नपाएको गुनासो सुनिदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ७४ बर्ष नाघिसकेका छन् ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ६६ बर्षका भए भने जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई ६७ बर्षका भए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ६८ बर्षका भए । त्यस्तै झलनाथ खनाल ७१ बर्षका भए । यी सबै प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।